Moto paJeddah Chitima Chiteshi - RayHaber
mushaTHE WORLDASIA966 Saudi ArabiaMoto paJeddah Chitima Chiteshi
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 966 Saudi Arabia, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, VIDEO 0
Moto pa Chitima Chitima
Moto wakapararira pachitima chechitima muJeddah, Saudi Arabia.
Moto wakamuka paHaramain yakakwira yejanji kuchiteshi muJeddah, Saudi Arabia. Chirevo nevekudzivirirwa kwevanhu, vanhu vashanu vakakuvara asi havana kuurayiwa mumoto.
Mavhidhiyo ezvemagariro evanhu, Jeddah Haramain chiteshi chechitima, cheutsi dema uye maherikoputa achibhururuka achibva padenga rechinoonekwa. Mavhidhiyo epamhepo anoratidza zvakare kuti pane vanhu gumi nevaviri padenga reimba iyi.
Iyo Haramain yakakwira zvekumhanya yechitima, inodhura EUR 6,7 bhiriyoni (7,3 bhiriyoni), yakavhurwa munaGunyana. Mutsara wevaMuslim ndewekubatanidza maguta matsvene eMecca neMedina kuguta reJeddah nezvitima zvemagetsi zvinofamba makiromita e2018 neawa (300 mamaira neawa), iine gore pagore re 186 mamirioni.
Moto mukuru wakakwira padenga reAl-Haramain yakakwira yechitima #Jeddah, #SaudiArabia
Vadzimi vemoto vari kushanda rakazara simba kubata nemamiriro ezvinhu.
Hapana kukuvara kwakataurwa. https://t.co/jbbwvQLomk
- هنده Moh Moh Moh Mohب Moh مب Moh Moh Moh Moh Moh م م Moh م م م September 29, 2019
Yolcati Train Station 09 / 06 / 2017 Yolçatı Railway Station Korkutan Moto: Elazığ -Malatya mugwagwa mukuru pa State State Railways Yolçatı Railway Station yekuchengetera moto yakaitika. Maererano nemashoko akawanikwa muna June 6 moto muimba yekuchengetera mabhizimisi kwechikonzero chisingazivikanwi mubato remagetsi rakabuda. Moto uri muchivako chekuchengetedza chivako chechimbichimbi wakakurumidza uye wakapararira kuvaki vevashandi vekufambisa. Vashandi veTCDD vanobva pamagetsi emoto kubva kuYolcati station pachiteshi chechivako nokukurumidza sezvo zvichigona kudzima moto. Muchiitiko chemoto chakauraya kana chakakuvadzwa panguva yekuongorora kwakaiswa. Kunobva: www.elazigsonhaber.com
Moto paKaro's Ramses Main Train Station ... Zvichida 25 Vakafa! 27 / 02 / 2019 Ichitima paRamses chikuru chechiteshi chezvitima muEgypt, guta guru reEgypt, rakaputirwa muchivako chakavharwa sezvo chakakurumidza kufamba. Mushure mekuparara, zvishoma 25 vanhu vakaurayiwa uye 50 vanhu vakakuvadzwa. Maererano nemitemo yemunharaunda, vanhu ve25 vakaurayiwa uye 50 vanhu vakakuvara semhaka yemoto uye kuputika. Vakuru vemahofisi ehuwandu hwevakafa uye vakakuvadzwa vasati vasvika. Ramses girasi rezvitima rakange rakavharwa pairi kutungamirira ma ambulensi nevadzivi vemoto kudzima. Zvinotaurwa kuti vanhu vari kushaya carbon monoxide muchetura nokuti havagoni kusiya chigaro. Sangano rekuchengeteka rinoshuma kuti hapana chinoratidza kuti njodzi yacho yaive nechinangwa, asi hurumende yekutakura ikataura makumi matatu
Jeddah kushamwaridzana kune dzimwe nzvimbo nenhamba itsva yechitima 27 / 10 / 2014 Jeddah kuti ibatanidzwe kune dzimwe nzvimbo nemutsara wechitima chitsva: Saudi Arabia yeJeddah muguta kuti iyanane nenyika yeJazan, iyo 660 ine makiromita yakareba yegungwa motokari yakagamuchirwa. Basa iri rinofanira kuitwa neSaudi Railway Organization rinotarisirwa kusimbisa hupfumi, hutengeserano uye hukama hwehukama pakati pematunhu maviri. Maererano nemitauriri yevhidhiyo, chibvumirano chakasayirwa nechinjini chimiro chekugona kudzidza. Zviremera, mari yepurojekiti, vatakuri vemitambo uye nhamba yemutoro pamwe nekudzidza kwakataura kuti mamwe mashoko akatendeka achasvika. Yakadzidzwa kuti chikamu chekutanga chekudzidza chakapedzwa. Nzira itsva yezvitima ichaenderera mberi mumhenderekedzo yepasi rose uye inosvika kuCezan Economic City.
Jidde-Mecca-Medina yakakwirira-motokari yemutambo test test yakatanga 27 / 01 / 2017 Jidde-Medina yakakwirira-motokari yekutsvaga mitsara yekuedza yakatanga: Jeddah - Mecca - Medina yakakwirira-purojekiti yepamusoro yakatanga kuvakwa kwekuedzwa yakatanga 2013'de. Ichitima, chinogona kukurumidza kusvika kuC330 km neawa, chichashandiswa kuderedza motokari kunyanya munguva yekufambisa. Muna 2013, Mutungamiri weSaudi Railways Organization. Cubara's 4 yakashuma Jeddah-Mecca-Medina yakakwirira-chechi yeprojekti, iyo ichagara kwegore uye inodhura 8 madhora emadhora. IHarameyn yepamusoro-purogiramu yepurazi yakagadzirirwa kuSaudi-Spanish Al-Shalya consortium mushure mekutengeswa. Jeddah - Mecca - Medina pakati pevashambadziri vane 160, iyo inotakura mutambo wepamusoro wechitima mumakiromita 450 ke
Magetsi eChechi yeMagetsi Maoko Anobata Jeddah High Speed ​​Station 18 / 06 / 2019 IHaramain High-Speed ​​Train Project (HHR), chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru kudyarwa kwezvitima zvakaitwa neHurumende yeSaudi Arabia, yakarongedzerwa kushumira nyika yeIslami kuburikidza nekufambisa rwendo rwevafambi, vaMus vaenzi nevagari veSaudi. Icho chirongwa chakakwirira chezvitima chinosangana nemaguta maviri matsvene eMecca neMedina nemugwagwa we450 km uye inosanganisira zvivako (Mecca, Jeddah, KAEC, Medina). Yapı Merkezi yakatanga kuvaka kweMotina yeMedina mukati mehutano hweHaramain High Speed ​​Train Project uye yakapedzwa kubudirira nokukurumidza sezvinobvira pakati pezvivako zvina. Nemhaka yezvaakabudirira muMedina Station, Yapı Merkezi apedza işler
Konya Tram Mepu, Konya Tram Maawa, Station Mazita uye Mutengo Chirongwa
Moto paKaro's Ramses Main Train Station ... Zvichida 25 Vakafa!
Jeddah kushamwaridzana kune dzimwe nzvimbo nenhamba itsva yechitima
Jidde-Mecca-Medina yakakwirira-motokari yemutambo test test yakatanga
Magetsi eChechi yeMagetsi Maoko Anobata Jeddah High Speed ​​Station
Chiziviso cheTender: Kuona moto uye nyevero yekasi yehurumende ichaiswa panzvimbo yekuchengetedza moto kwezvivako
Tender Notice: Kugadziriswa kwekudzima moto uye kudzima moto (kuna Sirkeci Marmaray Loko Maintenance Workshop Directorate)
Moto Kudzivirirwa uye Kudzivirirwa muTinnels 2014 - In-Fire Fire Protection Protection Conference
Chiziviso Chimiro: Kuvandudzwa kwemakabati emoto nemoto zvinoshandiswa mumadhorobha uye zviteshi
Kuziviswa kwezvinhu zvekutenga: Kuvandudzwa kwemoto makabati uye moto hoses mu ANKARAY